I-china 3ply ubuso obulahlwayo bohlobo I, Uhlobo II, Uhlobo Abakhiqizi be-IIR nabaphakeli | EMUVA PHAMBILI
3ply ubuso obulahlwayo buso bohlobo I, Uhlobo II, Uhlobo IIR
Isifihla-buso sokulahla esilahlwayo sakhiwa izingqimba ezi-3 zesendlalelo esingaphandle eselukiwe, ungqimba oluqhekekile olincibilikisiwe olungu-98% nolwelwesi lwangaphakathi olungalukiwe olunengqimba ethambile engaphezulu evimbela ukucasuka kwesikhumba noma izinkinga zokungezwani komzimba.
95% noma kufika ku-99%
indlebe noma ukubopha indlebe
okumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okubomvana nokunye
Ama-50pcs / ibhokisi, ama-40boxes / ctn
ezinsukwini ezingama-30 ngemuva oda qinisekisa
Ply engaphandle: 20GSM noma 25GSM / m2 (white / blue / green / pink / red / yellow noma omunye umbala) Polypropylene Spun eziboshiwe
Isihlungi esiphakathi nendawo: 20GSM / 25GSM / m2 (isihlungi esimhlophe esimhlophe esimhlophe);
ply kwangaphakathi: 18GSM noma 20GSM / m2
Imaskhi yokuhlinza elahlwayo yakhiwa izingqimba ezi-3 zesendlalelo esingaphandle eselukiwe, ungqimba olushaywe ngamatshe olungama-98% nolwelwesi lwangaphakathi olungaluki olunezingqimba ezithambile ze-hypoallergenic ezivimbela ukucasuka kwesikhumba noma izinkinga zokungezwani komzimba. Umkhiqizo uhambisana ne-EN14683 yohlobo II, thayipha i-standard ye-IIR.
2.No kuyacasula futhi kulula ukuphefumula ngokusebenzisa, eletha omuhle kakhulu ukuphefumula kahle nge ingcindezi umehluko. Ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane.
I-Loop Yezindlebe Ethambile & Enethezekile
Izinto zokwenziwa ngendlebe zenziwa nge-Latex free round Lycra elastic ehlangana nesilinganiso esingu-1: 2 okwenza kube lula ukugqokwa nokususwa ngokukhululeka.
4.The oluthambile ekhaleni wire ukugoba adjustable ngokukhululekile, kufanelana ibhuloho lekhala kanye nobuso.
I-1.I-mask elahlwayo yezokwelapha iqukethe umzimba wesifihla-buso, ibhande lesifihla-buso nesiqeshana sekhala. Umzimba wemaski wenziwe ngendwangu engalukwanga futhi indwangu yokuncibilikisa engenamluko e-meltblown, isiqeshana sempumulo senziwe ngezinto zepulasitiki ezigoqekayo, uhlobo lwe-mask yebhande A lwakhiwe ngendwangu yokunwebeka, kanti uhlobo B lwenziwe ngendwangu engalukanga;
2. Ukusebenza kokuhlunga kwamagciwane akukhona ngaphansi kwama-95%. Ukumelana komoya akukho ngaphezu kwe-49Pa / cm2. Inani eliphelele lamakholomu amabhaktheriya ngu≤I-100CFU / gE coli, iPseudomonas aeruginosa, iStaphylococcus aureus, i-hemolytic streptococcus, nesikhunta shkonke akutholakali.
Isitifiketi: I-CE ISO FDA, i-White efakwe ohlwini e-China.
Langaphambilini Professional Medical alahlwayo ingubo Avikelayo
Olandelayo: I-ORT103A Stethoscope